Taariikhda Adobe Illustrator | Abuurista khadka tooska ah
Taariikhda Adobe Illustrator
Qaab dhismeedka sanad-guurada 30-aad, Adobe Illustrator wuxuu ku faanaa inuu yahay aalad wax ka beddeshay naqshadeynta garaafka markuu furay albaabada si loo abuuro sawirada vector-ka oo aad loo isticmaalay. Wadada la soo maray waxay ahayd mid dheer oo aan shaki ku jirin inay dhib badan tahay, oo aan macno lahayn waa mid ka mid ah aaladaha ugu isticmaalka badan ee la doorbido by hal abuur iyo xirfadlayaal sawir iyo naqshadeynta garaafka
Wuxuu tilmaamayaa Adobe Illustrator, oo hadda ah in kabadan 180 milyan oo sawiro ayaa asal ahaan ka soo jeeda isticmaalkoodaXaqiiqdii, joogitaanka shirkadeeda daabacaadda waa mid aan muran geli karin tan iyo markii aan ku aragno baakadaha, boorarka, xirmooyinka, iwm.
1 Aynu yara dulmarno taariikhda Adobe Illustrator
2 Waqti ka dib noocyada la qabsiga shirkadaha kale iyo aaladaha ayaa yimid
Aynu yara dulmarno taariikhda Adobe Illustrator
Wuxuu ku dhashay 1987, ka dib waxay u furtay waddo cusub oo loogu talagalay daabacaadda dhijitaalka ah iyo adduunka naqshadeynta garaafka ee naqshadeeyayaashu u qaateen si hagar la'aan ah si ay u sii daayaan sawirro hal abuur leh iyo soo saarista shaqooyin aan la soo koobi karin ee farshaxanka dhijitaalka ah oo waqti qaatay isla markaana wali sii wada inay soo baxaan mahadnaq la qabsashada iyo isbedelka qalabka.
Faa'iidooyinka Adobe Illustrator laga soo bilaabo bilowgii ayaa ah loo oggolaaday la qabsashada naqshad kasta oo lagu qiyaaso cabbirro kala duwanHadday ahaan lahayd daabacaad ama shaashad, waxay u oggolaatay hagaajinta gacan-yaraha, ballaca ama dhererka astaamaha sheyga laftiisa, kaasoo ahaa mid ka mid ah walxaha ugu awoodda badan tan iyo markii la abuuray aaladda.
Markuu Adobe Illustrator asal ahaan ka soo jeedo, Waxaa lagu heli karay oo keliya noocyadeeda Apple Macintosh; Waxaa xusid mudan in Illustrator uu yahay softiweer ay soo saartay Adobe, kadib guushii ay ka gaadhay Postcript.
Waqti ka dib noocyada la qabsiga shirkadaha kale iyo aaladaha ayaa yimid
Tan iyo markaas, isbeddellada ayaa ka dhacay aaladaha had iyo jeer si loo hagaajiyo, haa, iyada oo aan luminin muhiimaddeeda. Mid ka mid ah isbedelada muhiimka ah ayaa ahaa xawaaraha kordhay, maadaama maanta ay 10 jeer ka dhakhso badan tahay sanadihii hore.
Qodob kale oo go'aamiyay meeleynta rasmiga ah ee Adobe Illustrator ee suuqa, ayaa ahaa waayitaanka tartamihiisa Freehand, ka dib markii Adobe ay heshay shirkadda mas'uulka ka ah abuuritaankeeda Macromedia oo ay kor u qaadday qalabkeeda illaa ay u qaadatay sida ay tahay maanta.
Si loogu dabaaldego 30-kii sano ee ay ku jireen gacanta xirfadleyda sawirada, Adobe Illustrator ayaa soo saartay cusbooneysiin ku saabsan barnaamijkeeda, halkaasoo mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee lagu daro ay tahay in isticmaalehu awoodo sawirrada dalagyada ee sawir-qaadaha laftiisa tanina waxay ka timid isla isticmaaleyaasha, oo in muddo ah codsanayay horumarintaan.
Cusboonaysiintaan, haa waxaad badbaadin doontaa waqti badan oo mar dambe uma baahnid inaad u gudubto barnaamijyo kale, si marka aad isticmaaleyso sawir aad fursad u heli doontid inaad jarto oo aad hagaajiso kontoroolayaasha si ay u sameeyaan jaritaanno fudud, qaybaha haray ee sawirka la yiri waa la tuurayaa, taas oo loo tarjumay sameynta feyl ka culus.
Horumar kale ayaa ah guddi midab cusub ayaa lagu daray aaladda leh xulashooyinka lagu abuurayo midabada, keydso oo ka soo qaado codsiyada kaleHaddii isticmaaluhu adeegsado barnaamijka Adobe, ka soo qaado midabada uu halkaas ku kaydiyo, wuu ku sii hayn karaa isagoo ku sugaya Adobe Illustrator inuu u isticmaalo marka uu u baahdo. Abuuritaanka mawduucyada midabka waxaa lagu taageeri doonaa caawimaad caqli badan.
Noocaan cusub ayaa loo heli karaa rakibida arjiga Creative Cloud ama cusbooneysiin cusub oo ku saabsan qalabka Sawirka.
Waxay ahayd in lafilo in cusbooneysiintan ay lasocoto wax kale, kama fili kartid wax kayar Adobe waana taas sababta Adobe InDesign CC ay ulasocoto isbadalka gabi ahaanba la cusbooneysiiyay si ay ufududeyso ka shaqeynta barnaamijyada kaladuwan iyo barnaamijyada naqshadeynta ee ku jira Adobe.
Waxay sidoo kale leedahay qaar ka mid ah baalasheeda, sida midka lagu abuurayo dukumeenti cusub, oo gebi ahaanba dib loo naqshadeeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Taariikhda Adobe Illustrator
Ku dhex abuur fiidiyow muuqaal leh Adobe Premiere